Tilmaamaha Safarka ee Sulawesi Xalaal eHalal Travel Mart
Sulawesi (oo hore Dabaaldegyo) waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn ee Indonesia, iyo Jasiiradda 11aad ee ugu weyn adduunka. Iyada oo afar gacmood oo gacmeed ku wareegaya dibadda, qaabka caarada ee Sulawesi si fudud ayaa loo garan karaa.
Jasiiraddan aadka u ballaaran waxay leedahay wax badan oo ay ku soo bandhigto booqdaha ka socda dhaqamada aan caadiga ahayn, illaa dhul buuraley ah oo aan si hoose loo sahamin, iyo dhowr goobood oo heer caalami ah oo dhab ah.
Marka laga eego aragtida kala duwanaanshaha noolaha, Sulawesi waa qeyb ka mid ah Wallacea, nidaam deegaan oo ku-meel-gaadh ah oo u dhexeeya kuwa Bariga Aasiya iyo kuwa Australasia, oo ay u aqoonsadeen labada WWF iyo Conservation International inay yihiin aagga mudnaanta ilaalinta adduunka. Magaca ayaa lagu xusayaa dhaqan-yaqaankii Alfred Russel Wallace, oo ku safray Malay Archipelago intii u dhaxeysay 1854 ilaa 1862, 31 ilaa 39 sano jir, saldhigyo ka sameystay Makassar iyo Manado, si uu uga soo uruuriyo muunado iib ah iyo inuu barto taariikhda dabiiciga ah. Wuxuu xusay farqiga u dhexeeya xayawaanka naasleyda iyo shimbiraha ee u dhexeeya jasiiradaha labada dhinac ee hadda loo yaqaan "Wallace line". Galbeedka ka mid ah, Sumatra, Java, Bali, iyo Borneo waxay wadaagaan xayawaan xayawaan ah oo la mid ah kan Bariga Aasiya, oo ay ku jiraan shabeellada, wiyisha, iyo daanyeerrada, halka kuwa ka imanaya Lombok iyo bariga ay inta badan ku nool yihiin marsupials iyo shimbiraha la midka ah kuwa Australasia. Sulawesi wuxuu muujinayaa calaamado labadaba.
Bini’aadamku wuxuu ku noolaa Sulawesi ugu yaraan 39,900 oo sano, sida khubarada qadiimiga ahi go’aamiyeen sanadkii 2014 in masawir gacmeed lagu xardhay godka Leang-Leang ee Koonfurta Sulawesi taariikhda ugu yaraan tahay 39,900 sano ka hor. Jasiiradda ayaa dhab ahaan la sameeyay qayb ka mid ah buundada dhulka loo isticmaalo dejinta ee Australia iyo New Guinea.
Bartamaha Sulawesi waxaa ku yaal in ka badan 400 megaliths granite, kuwaas oo daraasado qadiim ah oo kala duwan ay taariikhdoodu ahayd 3000 BC ilaa 1300 AD.
Reer Yurubtii ugu horreysay ee booqda jasiiradda waxay ahaayeen badmaaxiyiin reer Burtuqiis ah sanadkii 1525, oo laga diray Moluccas iyagoo raadinaya dahab. Nederlandku waxay yimaadeen 1605 waxaana si dhakhso ah u raacay Ingiriis, oo warshad ka sameeyay Makassar. Sanadkii 1905 jasiiraddii oo dhami waxay ka mid noqotay gumeysigii dowladdii Holland ee Netherlands East Indies illaa iyo qabsashadii Jabbaan Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Kadib wareejintii madaxbanaanida bishii Diseembar 1949, Sulawesi wuxuu ka mid noqday dowladaha federaalka Indonesia, Kaas oo 1950-kii u milmay Jamhuuriyadda midowday Indonesia.
Dhulka adag ee Sulawesi, baaxaddiisa (174,600 km²) iyo dhaqamada waaweyn ee badda, ayaa isku darsamay inay sabab u noqdaan dadyow kala duwan oo dhaqamo kala duwan, ku hadla sideed luqadood oo waaweyn isla markaana sheegta muslimiin, kirishtaan, Hinduus iyo astaamo aaminsan (oo aan ku xusno iskudhafyo kala duwan) .
Islaamku waa diinta ugu badan ee Sulawesi. Ku-beddelashada dhulka hoose ee jasiiradda koonfurta-galbeed ee Koonfurta Sulawesi ee Islaamka ayaa dhacday horraantii qarnigii 17-aad. Inta badan Muslimiinta Sulawesi waa Sunniyiin.
Khariidada Sulawesi oo leh gobollo midabbo lagu calaamadeeyay
Koonfurta Sulawesi (Makassar, Tana Toraja)
gobollada Koonfurta Sulawesi iyo West Sulawesi; magaalada ugu weyn jasiiradda, dhulka Bugis iyo dhaqanka gaarka ah ee Tana Toraja
Koonfur-bari sulawesi (Kendari, Wakatobi)
dhul durugsan iyo runtii heer caalami oo lagu quusto badda
Bartamaha Sulawesi (Palu, Lore Lindu National Park, Jasiiradaha Togian)
gobol si murugo leh loogu yaqaan khilaafaadka qoomiyadaha; quusid-waddo-garaacid-aad u daran
Waqooyiga Sulawesi (Manado, Bitung, Gorontalo, Tomohon, Bunaken)
dhulkii Minahasa iyo wali quusitaan heer caalami ah oo laga yaabo in laga yaabo inay tahay meesha ugu fiican ee la yaqaan ee Indonesia
Makassar (Ujung Pandang) - caasimada koonfurta iyo magaalada ugu weyn Sulawesi
Bitung - magaalada dekedda weyn ee woqooyiga taas oo marin u ah meelaha lagu quusto
Manado - caasimada woqooyiga iyo marinka loo maro Bunaken
Palu - caasimada Central Sulawesi
Mamuju - caasimada galbeedka Sulawesi
Kendari - caasimada koonfurta bari ee Sulawesi
Rantepao - magaalada laga galo Tanah Toraja
Tomohon - waa magaalo qabow oo ku cusub waqooyiga buuraleyda
Tentena - magaalad yar ee transit-ka ee hareeraha-hareeraha wadada loo maro Ampana
Bangka - koox jasiirad ah oo ku taal woqooyiga oo leh quus caalami ah
Xadiiqadii Qaranka ee Bogani Nani Wartabone - beer kaynta ku taal waqooyiga oo u dhow Gorontalo oo hoy u ah tarsiers iyo duurjoogta kale ee badan.
Bunaken - baarkinka badda oo leh qaar ka mid ah quusitaanka adduunka ugu fiican
Beerta Xadiiqadda Qaranka ee Lore Lindu - beerta qaran ee muhiimka u ah keymaha ku yaal bartamaha buuraha oo hoy u ah qaar ka mid ah 77 noocyada shimbiraha ah ee dhammaadka leh iyo qaar ka mid ah megaliths cajiib ah.
Tana Toraja - buuraleyda caan ku ah caan-bixintooda aaska
Keydka Dabiiciga ee Tangkoko - waa guriga tarsier, daanyeerka adduunka ugu yar
Jasiiradaha Togian - Meel loogu talagalay quusidda jidka ka baxsan waddada garaacday
Wakatobi - beero qaran oo badeed, haddana quus ka sii heer caalami ah
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Indonesia > Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Sulawesi